काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक ऋण लिएर विकास गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन्। ‘निब्र्याजी पाएपनि वैदेशिक ऋण लिन हुँदैन’, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘ऋण लिएको केही वर्षमा डलरको मूल् ...
सांसदलाई डेरा छैन, मन्त्रीलाई घरैघर !
काठमाडौं — सांसद आवसका लागि राज्यले बर्सेनि ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेछ । तर, सरकार संसाद आवास भवन भने छुट्याईको १ सय ४९ रोपनी ४ आना जग्गा मासेर मन्त्रीहरुका लागि घर ठड्याउने तयारीमा छ । मन्त्रीहरु बस्दै आएको आवासलाई भने भत्काएर राजकीय अतिथि गृह ...
'सम्बन्ध बिग्रेपछि फेसबुकमा ब्ल्याकमेल'
काठमाडौं — टेकुमा एउटा सानो त्रिपालभित्र छ, अपराध महाशाखाको साइबर क्राइम फाँट। त्यहाँ अचेल दिनभर तनाव हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक बनेसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ। साइबर क्राइम फाँटमा हरेक दिन २० देखि २५ जना पीडित उजुरी लिएर पुग्छन्।उजु ...
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः कहिले आउँछ आरोपीको डीएनए रिपोर्ट ?
काठमाडौं– निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दुई अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरेका छन् । सामूहिक बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरेको उनीहरुले सोधपुछका क्रममा बताएका छन् । प्रदीप रावल र विशाल चौधरीले अपराध स्वीकार गरेको केन्द्ीय ...
निगमलाई हुन्छ दैनिक चार करोड नाफा तर, इन्धनको मूल्य २ रुपैयाँ मात्र घट्यो
काठमाडौं –१५ दिनका लागि साढे ५६ करोड नाफा सुनिश्चित गरेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर समान दुई रुपैयाँ घटाएको छ । सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी भएको समायोजनसँगै पेट्रोल एक सय १२ तथा डिजेल र मट्टीतेल ९९ रुपैयाँ प्रतिलिट ...
१८ वर्षमुनीकालाई डिस्को र दोहोरीमा बन्देज
काठमाडौं — प्रहरीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई केही मनोरञ्जनस्थल प्रवेशमा कडाई गर्ने भएको छ । प्रहरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ लाई कडाईका साथ लागू गर्न थालेपछि कामठाडौंका मनोरञ्जनस्थल डिस्को, पव, दोहोरी साँझ, लाउन्ज बार मा १८ वर्ष भन्द ...